လွှတ်တော်ထဲရောက် ဖွတ် စိတ်ရူးပေါက် လျောက်ပြောနေပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » လွှတ်တော်ထဲရောက် ဖွတ် စိတ်ရူးပေါက် လျောက်ပြောနေပုံ
လွှတ်တော်ထဲရောက် ဖွတ် စိတ်ရူးပေါက် လျောက်ပြောနေပုံ
Posted by အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး on Jul 20, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues | 36 comments
ဖြတ္စကားေျပာေန၏ ၾကံ့ဖြတ္က ဖြတ္
ဒီကနေ့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံး ဖတ်စရာတခုကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေတဲ့ 南方周末 – Southern Weekly (Southern Weekend) စာစောင်နဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်း အင်တာဗျူး ဆိုတာပါပဲ။
ဒီစာစောင်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အလယ်အလတ်အကျဆုံး၊ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး လို့ New York Times သတင်းစာက ဆိုထားပါတယ်။
တရုတ်လို ဖော်ပြထားတဲ့ အင်တာဗျူးကို ဘားမားနက် burmanet.org မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။
အဲဒီထဲက ကောက်နုတ်ချက်တချို့ကတော့ ဒီလိုပါ –
-အနောက်က မြန်မာပြည်ကို ပိတ်ဆို့ပြီး သူတို့ရဲ့ ရုပ်သေးအစိုးရကို အာဏာရစေချင်တာ၊ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အာဏာကိုဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ယူချင်တဲ့အုပ်စုတစ်စု ရှိတယ်၊ ဒီအုပ်စုက အနောက်ဩဇာခံအုပ်စုပဲ …
– ယူအန်ကို ယုံစရာလား၊ ယူအန်ကို ဘယ်သူထိန်းချုပ်နေသလဲ၊ ဘန်ကီမွန်းကို ဘယ်သူထိန်းချုပ်နေသလဲ၊ ယူအန်ရဲ့ ဌာနချုပ်က နယူးယော့မြို့မှာ နော် …
-ကျုပ်တော့ ဘန်ကီမွန်းကို မကြိုက်ဘူး၊ မယုံဘူး၊ ဒီလူဟာ အနောက်နဲ့ တစ်ဖွဲ့ထဲပဲ၊ သူတစ်ပါးပြည်တွင်းရေးကို မဆိုင်ပဲ ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်နေတဲ့သူတွေ ….
– ဟီလာရီကို အဝင်ခံတာ ကျုပ်တို့အရေးနိမ့်မှုတစ်ရပ်ပဲ၊ သူ မြန်မာပြည်ကိုလာတာ ပြည်သူတွေကိုတွေ့ဖို့မဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူး၊ ဟိုမိန်းမကိုလာတွေ့တာ၊ သိတယ်မဟုတ်လား ဟိုမိန်းမလေ၊ အဲဒီမိန်းမကြောင့် ကျုပ်တို့နိုင်ငံ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုခံရတာ …
-လွှတ်တော်ထဲမှာ အတူတကွပူးပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်မလား ..ဟားဟား ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့၊ ကျုပ်တို့က ၇၆% ဒင်းတို့က ၆% ဟားဟား ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ …
-ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒင်းတို့ဘာလို့အကြီးအကျယ်အနိုင်ရသွားသလဲဆို ပြည်သူတွေက ရူးလို့ပေါ့၊ အဲဒီမိန်းမက ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတယ်လေ၊ ဒါကလည်း နိုင်ငံသူရဲကောင်းကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်နေလို့သက်သက်ပါဗျာ …
-ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကနေ ကျုပ်တို့ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာက နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ လူကြိုက်များမဲ့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်မဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေကို များများလုပ်ဖို့ပဲ ..
-မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တာ ဦးသိန်းစိန်တစ်ယောက်ထဲရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ၊ လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက် မဟုတ်ဘူး၊ ကျုပ်တို့က တရုတ်နဲ့မြန်မာကြား နားလည်မှုလွဲမှားသွားမှာ သိပ်စိုးရိမ်တယ်၊ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားလုံး ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာ၊ ဘယ့်နဲ့ဗျာ ဒီလောက်အရေးပါတဲ့ စီမံကိန်းကို ရပ်ပစ်ရတယ်၊ ဒီစီမံကိန်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအား မလုံလောက်မှုကို အများကြီးအကျိုးပြုမဲ့ စီမံကိန်းဗျ၊ ဒီစီမံကိန်း ပြန်ကို ပြန်စရမယ်ဗျာ …
အောင်ဇင်လတ် Facebook မှာ လမ်းတစ်ခြမ်းခင်းသူကြီးရဲ့ မှတ်သားဖွယ်စကားများ ဆိုပြီး အဲဒီလို တွေ့ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုတော့ burmanet.org မှာ အခုလို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်သေးအစိုးရ ထူထောင်ချင်သူတွေ ရှိနေတယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြော ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။
ကူးယူတာပါ။သူတို ့လို လွှတ်တော်ထဲ စာရွက်ကြည့်ဖတ်တာ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နဲ ့
သူတွေကြားထဲ၊ထောက်ခံတဲ့နေရာမှာ စာအရှည်ကြီးတွေ ဖတ်ပြီးထောက်ခံတဲ့ လွှတ်
တော်ထဲက ခပ်ပျက်ပျက်သူတွေက ဝေဖန်တဲ့ အသံကို သီးမခံနိုင်လို ့ပါ။
ဒီလူက ရှေ့က၊ နောက်ကသူ့တပည့်က ပြောင်းဖူး မှာ “မ” ရေးပြီး တာမွေဈေးထဲ လျောက်သွားတဲ့ သူပေါ့ ဒီလောက်ပဲဦးနှောက်ရှိတာလေ ..
သေဂျင်းဇိုး ၊ ပထွေးကိုအဖေခေါ်ပီး နို့ကြက်ဥတိုက်ချင်နေတာ။
သောက်ခွက်ကိုက အဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ ကျက်သရေကိုမရှိဘူး။
ခေါင်းပေါင်းနဲ့ အသားအရေနဲ့ တော်တော်လိုက်တာပဲဟ အရောင်လေးကိုဟပ်လို့ ၊
အော် ဘဝဘဝ ……..
mg htoo says:
(စောက်ရူး)to the power 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000………………….infinity
ိဒီလိုဖွတ်မျိုး တွေအုပ်ချုပ်နေလို့ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတွင်းက တက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောတဲ့စကားကလည်း ကလေကချေနဲ့။ အထက်ကိုဖားပြီး တက်လာတာ သေချာတယ်
Eleven. မှာတွေ့တာက -ဧရာဝတီ အနာဂတ်အတွက် စိတ်မချရသေး၊ မြစ်ဆုံဆည်အား မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ရမည်ဟု အာဏာရ USDP ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ပြောကြား
မကြာသေးမီက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မိမိ၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း တည်ဆောက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု ဆိုသော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည်အား မဖြစ်မနေ ပြန်လည် စတင် တည်ဆောက်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း အာဏာရ
USDP ပါတီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက တရုတ် နိုင်ငံထုတ် Southern Weekend သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဖြေကြား ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် လူထုလူတန်းစား အဖွဲ့အစည်းများ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူအများအပြားက ဆန့်ကျင် ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်အပြီး ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ကာ သမ္မတက ၎င်း စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော သမ္မတ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ယခင် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်း အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်းက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာတွင် စိန်ခေါ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဦးအောင်သိန်းလင်းက “ဒါဟာ သူ (သမ္မတ) ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ပါ၊ လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို ဆန့်ကျင် ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး မူဝါဒမဟုတ်ပါဘူး။ သမ္မတ ဟာ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဖြေကြားသွားပြီး ယခု မြစ်ဆုံဆည်အား ပြန်တည်ဆောက်သင့်သလားဟု မေးမြန်းရာတွင် “ဆောက်ကို ဆောက်ရမှာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့
လျှပ်စစ် ဓာတ်အား လိုတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒါကိုရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ ” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
USDP ပါတီ၏ အဓိက အလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် NLD ပါတီနှင့် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြင်းပြင်ထန်ထန်ဝေဖန်သွားခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်အားလည်း ” ကျွန်တော်သူ့ကို မယုံဘူး။ ကုလသမဂ္ဂ ကိုလည်းမယုံဘူး ” ဟုဖြေကြားသွားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် လာရောက်ခြင်းမှာ ” ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် လာတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအမျိုးသမီး (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရည်ညွှန်းသည် ) အတွက်လာတာ” ဟုဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်သိန်းလင်းက EU နှင့် US အား ” သူတို့ကိုမယုံဘူး။ သူတို့က သူတို့လိုချင်တဲ့ ရုပ်သေးအစိုးရတင်ဖို့ ဂိုဏ်းဖွဲ့နေကြတာ ” ဟုဆိုပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်NLD အပေါ် လူအများအပြားက လှိုက်လှဲစွာ ထောက်ခံနေကြခြင်းအပေါ် မေးမြန်းရာ သူက ” လူတွေက ရူးနေကြတာပါ။ သူက လူကြိုက်များရတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်လို့ပါ ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးအောင်သိန်းလင်းက ” ကျွန်တော်တို့ သင်ခန်းစာတွေရတယ်။ လူထုနဲ့ အများကြီးဆက်ဆံရမယ်။ လူထုလိုအပ်ချက် ဆန္ဒတွေကိုသိရမယ် ” ဟုဆိုပါသည်။
သို့ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို လိုလားခြင်းမရှိကြောင်းကို ဦးအောင်သိန်းလင်းအနေဖြင့်မသိကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတစ်ဦး က သုံးသပ်ပါသည်။ အဆိုပါ သုံးသပ်သူက ” သူတို့ ထပ်နိုင်ရင် ဒီမြစ်ဆုံဆည်ကို မဖြစ်မနေ ဆောက်မယ်လို့ ဦးအောင်သိန်းလင်းက ဆိုရင် ၂၀၁၅ အတွက် အဖြေက ထွက်ပြီးသားပဲပေါ့။ ပြိုင်စရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး” ဟု မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
USDP ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ၂၀၁ဝ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဲရလဒ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အငြင်းပွားမှုမှာ ကြိုတင်မဲ အများအပြားဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလအတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် လမ်းခင်းခြင်းများပြုလုပ်ရာ၌ ၎င်းသည် ပါတီငွေကြေးနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ငွေကြေးများကို ရောထွေးသုံးစွဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲဝေဖန်ခြင်းများကိုလည်း ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
သူကများအပြန်ပြန် လာသေးတယ်။မင်းက ချီးစားတဲ့ သောက်ခွက်၊အိမ်ချီးထုပ်ပစ်ခံရ
လမ်းတခြမ်းခင်းဝံဂျီး၊ဓါတ်တိုင်ပြ မဲခိုးတဲ့ ဝံဂျီး။အရက်သမားရုပ်နဲ ့ဝံဂျီး။
The Angry Man says:
ဘာကွ. ဟေ ငါတို ့ပြောင်ပြောင် အပြစ်တဲ့လား ဟ။ပြောင်ပြောင်ရေ မင့်လူကွ အော်နေလိုက်တာကွာ
အူးအောင်သိန်းလင်းလို လူမျိုးကြောင့် မြန်မာပြည်ဒီလို ဖြစ်နေတာလေ။ဒါကို ပထွေးကို အဖေတော်ချင်နေသေးတယ်။သူ့ပထွေး နှိပ်စက်လို့ မြန်မာပြည်ဒီလောက်မွဲသွားတာလေ။တရုတ်ပြည်မှာ သုံးတဲ့ ပရဘောဂတွေ ကြည့်လိုက်ပါ ။ကျွန်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်း မြန်မာပြည်မှာ သုံးတာထက်ပိုကောင်းနေတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ အတိုက်အခံ ဆိုတာ ရှိနေတတ်တာကို နားလည်ပေမယ့်
ဒီလူ လိုမျိုး မျက်နှာပြောင်တာ ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့
ဖတ်ရတာ ဟာသ ပါဘဲ ။
ဪ…cobraနဲ့တော့ဖြင့် ခက်ရပြန်ပါပြီ။ မဲလိမ်၊ မဲခိုးပြီး လွှတ်တော်ထဲရောက်ပါတယ်ရှိုမှ။
ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင် says:
ရုပ်ကြီးကိုကြည့်ပါလား ပြီတီတီနဲ့ ကြာကူလီရုပ် ၊
ဥပတိရုပ်က ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ကျက်သရေတုန်းပ ။
ဘယ်လို ဟာကြီးပါလိမ့် ။
အတ္တာ နတ္ထံ မနသိ ဇာနာတီတိ မနုေဿာ…
အကြောင်းနဲ့အကျိုး…. အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားသိတတ်လို့ လူတဲ့။
ဟုတ်ပါတယ် အကိုတို ့ရေ ကျနော်လဲ အတိုက်အခံသဘောကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။
အတိုက်အခံရှိမှ တိုးတက်မယ် ဆိုတာကိုလဲ သိပါတယ်။ဒီလို အတိုက်အခံမျိုးက(ကိုပေ့ စကား)
စော်ကားနေတယ် ယူဆပါတယ်။စ ဖတ်ဖတ်ချင်းတော့ အတော့်ကို ဒေါသထွက်သွား
တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ဘာနှောင်ကြိုးမှမရှိတဲ့အကူအညီပေးပါလား
ခုတော့ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးပြီးလို့ လျှပ်စစ်ထွက်လာယင်
ကျုပ်တော့ ရိုးမှရိုးရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်လာပြီ…
ဒီမိုကရေစီစနစ် လိုအပ်ချက်အရပြောရရင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီကိုအတိုက်အခံအင်အားစုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိစေချင်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့်..ဒီလို ယဉ်ယဉ်လေးအဆင့်ကိုကျော်လွန်နေတဲ့ ရူးသွတ် နံစော်နေသူတွေများနေသမျှကာလပတ်လုံး၊
ပါတီရဲ့ အရေးပါတဲ့ခုံနေရာတွေမှာပေးထိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ဒီကြံ့ဖွတ်ပါတီကြီးထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့
လူကောင်းတွေ၊ ပညာတတ်တွေ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အတန်းဟာလည်း ဘယ်တော့မှ တောက်ပြောင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး..
ဒီတော့ ဒီကနေ့..ကြံ့ဖွတ်လူကြီးမင်းများ အတွက်စဉ်းစားစရာ ကတော့..
ကြံ့ဖွတ်ပါတီအဖြစ်နဲ့..ကောင်းသူမနေ နေသူမကောင်း အဖြစ်နဲ့ပဲဆက်ဒိုးနေမှာလား.. ဒါမှမဟုတ်
ကြံ့ဖွံ့ပါတီအဖြစ်နဲ့ … ကောင်းသူနေပြီး နေသူကောင်း အောင်ပြုပြင်မှာလားဆိုတာလေး စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။
ကြက်သရေမရှိတဲ့ မျက်ခွက်ကြီးမြင်ရတာ ထမင်းစါးပျက်တယ်ဗျာ။
ကမ္ဘာ့ ကျက်သရေ အရုပ်ဆုံး ဆုပေးမယ်။
ဦး အောင်သိန်းလင်းမှာ ၊ အဲဒီလိုပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေရောက်နေပြီလေ ။
သူက တရားဝင် ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေပြီကိုး ။
သူ့အသံ ဟာ သူ့ မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့ အသံ ဖြစ်နေပြီကိုး ။
သွားဆဲလည်း ၊ လေကုန်ယုံ ရှိတော့မပေါ့ ။
သင်္ခန်းစာသာ ယူလိုက်တော့ ။
နောက်ကိုသာ လူရွေး မမှားစေနှင့်တော့ ။
အမတ်က.. အစိုးရအဖွဲ့နဲ့.. တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကို.. ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်..
သမ္မတနဲ့တော့.. ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ..။ ပါတီတူတူချင်းကို.. ပါတီထဲတိုးတိုးမညှိပဲ မီဒီယာပေါ်တက်ပြောတော့.. ပြဿနာမသေးဘူးပဲ..
Recall! Recall! Recall! Recall!
သူကြီး ပြောသလို ဆွဲ ချလို့ ရမယ် ဆိုရင် ရင် ခု ပဲ ဆွဲချလိုက် တယ်။
ဘယ်လွတ်တော် ထဲ မှာ မှ မမြင်ချင်ဘူး။
ဘယ်အုပ်ချုပ်ရေး ထဲ မှာ မှလဲ မမြင်ချင်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လဲ မမြင်ချင်ဘူး။
အောင်သိ်န်လင်း မြန်မာနိုင်ငံ က ထွက်သွား။
သူ ့မဲဆန္ဒနယ် တောင်ဥက္ကလာ ဖက်ကနေ မဲလိမ် မဲခိုးအမတ်ဖြစ်လာတော့၊
သူ ့နယ်မှာ ပြန်ပြီး ဆန္ဒမဲပြန်ကောက်သင့်တယ် ယူဆပါတယ်ဗျာ။ဒီလူက
ပြည်သူတွေ ကျွေးတာစားပြီး ကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကိုက်နေတာဘဲ။ခေတ်နောက်
ပြန်ဆွဲ၊နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်လိုသူတွေထဲမှာ ဒီအမတုတ်ပါနေပုံရသည်။
ဒါမှမဟုတ်ရင် သူ ့အကျိုးစီးပွားအတော့်ကို ဆုတ်ယုတ် နစ်နာထားတယ်လို ့
Yes, look at that face, Rackless and brain dead.
၂၀၁၅ အထိ ကျက်သရေ မ ရှိတဲ့မျက်နှာ ကို ကြည့်နေရဦးမှာလား။
အနာရှိရက်နဲ့… မနာရင် မကောင်းဘူး….
ခုတော့ နာလာပြီ…. မကြာခင် ပြီပေါက်သွားလိမ့်မယ်။
ဆေးထည့်ပေးမှဖြစ်မယ် ဦးဇောက်ရဲ့ မဟုတ်ရင် ပြည်ပေါက်၊ယင်နားပြီးလောက်ထိုးပုတ်ပွသွားရင်ခက်ရချည်ရဲ့။
(ဒီလူမျက်နှာမြင်ရတာ မနက်စောစောစီးစီး ကျက်သရေတုံးလိုက်တာ။)
“Aung Thein Linn: Generally speaking, our foreign policy seeks peaceful coexistence. We haveaclose and friendly relationship with China. China has helped us tremendously foralong time. Everyone knows that. In Myanmar, you could see China’s donations everywhere. ”
I don’t agree with him at that point. I doubt china help/aid to Myanmar is very few compare china aid to African countries. even, china aid to Thai is more than Myanmar.
Somebody should research on that matter and let our Myanmar people know.
ကျုပ်အထင်တော့ ဦးအောင်သိန်းဖွတ်နဲ့ ကြေးမုံဂျီး တဦးထဲဖြစ်ရမယ်ဗြ။ နှစ်ယောက်စလုံးက မြစ်ဆုံရေကာတာ သိပ်ဆောက်ချင်တာ တူလွန်းနေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရော ဘယ်လိုမြင်သလဲ…။ ကြေးမုံဂျီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ ဖွတ်အောင်သိန်းလင်းအမှတ်နဲ့…။ :mad:
ဟယ် ချောချက် ခန့်ချက်ဟယ် ပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေကလည်း သိပ်အဖိုးတန်တာပဲ အတော့်ကို အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်ပြီး ပညာတတ် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးကိုး တို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီး လိုအပ်တာပဲ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကများ ချီးထုပ်နဲ့ပေါက်တယ်မသိ သူပြောတာကို အားလုံးထောက်ခံတယ်
မှတ်ချက်။ စီလုပ်ကြီးတစ်ယောက်၏ အတွေးဖြင့်မန့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဓာတ်အားလိုတယ်ဆိုရင်လဲ သူ့နှာဂိုဒေါင်ကထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါလား…. နှာဘူးရုပ်နဲ့ကွာ စိုင်းအောင်တင့်တောင်သူ့ထက်ရုပ်ထွက်လှတယ်…
ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး…ဆဲပြန်ရင်လဲ ဆဲသူကိုယ်သာအောက်တန်းကျဖြစ်မယ် (ခွေးနဲ့ ဖက်ရန်ဖြစ်ရင် ကိုယ်လဲခွေးအဆင့်ဖြစ်သလိုပေါ့)
စိတ်ထဲမှာတော့ တနူံ့နူံ့နဲ့ နရင်းပါးရင်းတွေ ဖြတ်ရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်
နောက်ဆုံး ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဒီနှိင်ငံ ဒီလိုဖြစ်တာ ဒီလိုကောင်တွေ ဒီနေရာမှာ ရှိနေလို့ လို့ဆင်ခြင်မိပါတယ်….
အားပေး ဖတ်ရှုသူ များ၊ရွှေဉာဏ်တော်ဖြင့် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသူ ဆရာသမား၊ညီအကို များအပြင်
နောက်မှ တကောင်ကောက်လိုက်၍ အနီပေး နေသော ထိုထိုသတ္တဝါအပေါင်းအားလဲ မေတ္တာပို ့ပါ
ရွာသာကြီး ပို ့လိုက်ပေါ့ဟယ်။အခွက်ကိုက ပြောင်တယ်။